« Can 2017 » tanterahina any Gabon : hangotraka ny famaranana amin’i Ejypta sy i Kameronina | NewsMada
« Can 2017 » tanterahina any Gabon : hangotraka ny famaranana amin’i Ejypta sy i Kameronina
Ho lalaon’ny ekipa samy “favori” tamin’ity Can andiany faha-31 ity ny famaranana ny alahady izao ao Libreville Gabon. Hifampitana amin’izany ny andrarezin’ny kitra afrikanina, ny Liona tsy voafolaka Kameroney sy ny Faraonan’i Ejypta.
Tafakatra ary hanao ny famaranana ny alahady izao i Kameronina rehefa nanamontsana an’i Ghana 2 no ho 0 be izao, afakomaly teo amin’ny manasa-dalana faharoa. Niezaka ny nanindry sy nampiseho lalao tsara ihany ny Kintana mainty, indrindra teo amin’ny fe-potoana voalohany, saingy tsy nahovoka manoloana ireo mpilalao tanora eo anivon’ny Liona tsy voafolaka. Nampiditra ireo baolina roa ho an’ny Kameroney i Michael Ngadeu, minitra faha-73), sy i Christian Bassogog, tany amin’ny fe-potoana fanampiny, minitra faha-94. Vita hatreo indray izany ny lalana sy ny nofinofin-dry Gyan sy ry Razak eo anivon’ny Kintana maintin’i Ghana na maro aza ireo niandrandra azy ireo handrombaka ny “Can 2017”.
Noporofoin’ny Kameroney koa ary mbola hasehony amin’ny alahady izao fa manana mpandimby ry Roger Mila na ry Thomas N’kono teo anivon’ny Liona tamin’ny fotoan’androny amin’izao hiakaran’izy ireo amin’ny famaranana izao.
Tsy afa-bela tamin’ny Faraona ny Liona
Etsy andaniny, tsy azo amaivanina ny Faraona satria miverina amin’ny heriny tanteraka amin’izao fotoana izao, miaraka amin’ny traikefan’ilay mpiandry harato, i El Hadary 44 taona, ary anisan’ny niaro ny voninahitry ny Ejypsianina tamin’ireo lalao efa vita. Sarotra sy manahirana rahateo ny mandrava sy mamaky ny vodilaharan’i Ejypta. Tsy afa-bela tamin’ny Faraona hatrany ny Liona tamin’ireo lalaon’ny roa tonta. Resin’i Ejypta teo amin’ny ampahefa-dalana ny Lion any taona 2010 ary nibatan’ny Ejypsianina ny Can fanimpitony izany. Hahazo ny Can fanimbalony ry El-Hadary raha tafita eo raha hibata izany fanindiminy kosa ny Kameroney raha tafavoaka mandresy.
Mialoha ny famaranana rahampitso kosa, hiady ny laharana fahateo i Borkina Faso sy i Ghana.